Ny lahatsoratr'i Jascha Kaykas-Wolff momba Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Jascha Kaykas-Wolff
Jascha Kaykas-Wolff dia mino fotopoto-pitsipika roa lehibe: Mitadiava fotoana tsy mitady olona hafa; Ary, aza disoina mihitsy amin'ny fomba mitovy indroa. Izy io dia fomba iray mifantoka amin'ny fomba fanao amin'ny marketing Agile. Miaraka amin'ny BA amin'ny Psychology avy amin'ny Whittier College, iray izay nanompo azy tsara sy manokana. Amin'ny maha mpivarotra efa ela azy sy mpanolo-tsaina manana traikefa momba ny fitantanana mpanatanteraka ao amin'ny Yahoo !, Microsoft, Webtrends, Involver (azon'i Oracle), ary Mindjet dia mitarika marketing any amin'ny Bit Torrent.
Alakamisy, Septambra 18, 2014 Alahady Oktobra 4, 2015 Jascha Kaykas-Wolff
Manomboka amin'ny fananganana tranobe ka hatramin'ny rindrambaiko fananganana. Tamin'ny taona 1950 dia nampidirina amina endrika sy famolavolana lozisialy ny maodelin'ny fampandrosoana ny riandrano. Ny rafitra dia reliky ny indostrian'ny famokarana izay, raha ilaina, ny valiny marina dia tsy maintsy noforonina alohan'ny nanombohan'ny asa. Ary, amin'ity tontolo ity, misy dikany ny valiny mety! Azonao an-tsaina ve ny tranga iray izay nanapahan-kevitra hanangana trano-trano amin'ny fomba hafa amin'ny alàlan'ny fananganana? Izany dia nilaza fa ny vokatry ny
Famolavolana ny Organisation Marketing Optimal.
Zoma 15 Novambra 2013 Zoma 15 Novambra 2013 Jascha Kaykas-Wolff
Nandritra ny resadresaka nifanaovana tamin'ny namako sy mpiara-miasa amiko Joe Chernov, VP Marketing ao Kinvey izahay dia nifanakalo ny sasany amin'ireo fanontaniana napetraka indrindra azonay roa tonta tao amin'ny ekipanay sy avy amin'ireo mitovy taona aminay ao amin'ny orinasa. Amin'ny maha-mpivarotra atiny an'i Joe anao dia tsy ho gaga ianao raha mahafantatra fa ny iray amin'ireo fanontaniany be dia be dia ny: Ahoana ny fomba hanombohako programa fandaharana marketing mahomby? Ny fanontaniana faharoa apetrany matetika indrindra dia ny: